मात्र चार गुप्त आदानप्रदान दक्षिण कोरियाली नियामक को आवश्यकताहरु पालन - Blockchain समाचार
लेट मा जनवरी, यो दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले द्वारा आधिकारिक प्रतिबन्ध बारेमा ज्ञात भयो अज्ञात cryptocurrencies मा लेनदेन, जो जनवरी मा शक्ति मा प्रवेश 30. अनुसार दक्षिण कोरिया को वित्तीय सेवा आयोग को आवश्यकताहरु संग (FSC), छ बैंकहरू रियल नाम संग खाता बनाउनको लागि एउटा पूर्वाधार स्थापना गर्न वादा गरेको छ. तथापि, पछि बाहिर गरिएका रूपमा, बैंकहरू Cryptocurrency आदानप्रदान को ग्राहकहरु नयाँ सेवाहरू प्रदान गर्न आवश्यक छैन.
“एक मुद्रा विनिमय तोकिएको नयाँ खाता सिर्जना बैंक को एक स्वैच्छिक निर्णय छ,” एक बैंकिंग उद्योग आधिकारिक Yonhap को दक्षिण कोरियाली संस्करण भन्नुभयो. तिनी भन्छन्: “पैसा शोधन रोक्न कानूनी दायित्व छ भनेर बैंक मात्र आन्तरिक प्रक्रियाहरु द्वारा जाँच गरिन्छ: यस गुप्त विनिमय देखि ग्राहकहरु को पुष्टि, प्रणाली को स्थिरता, विरोधी-धन शोधन मान्यता संग प्रयोगकर्ता जानकारी र अनुपालन को सुरक्षा।”
को छ बैंकहरू उल्लिखित को, मात्र तीन – Shinhan बैंक, Nonghyup बैंक र कोरिया को औद्योगिक बैंक – गुप्त आदानप्रदान को ग्राहकहरु खाताहरू प्रदान. र मात्र चार 25 दक्षिण कोरियाली मुद्रा विनिमय आदानप्रदान वास्तविक नाम संग खाताहरूमा अज्ञात खाता परिवर्तन. यसरी, नयाँ विधान आवश्यकताहरु Bithumb अनुरूप, Upbit, Coinone र Korbit.
एशिया आर्थिक अनुसार, Shinhan बैंक, जो गर्दछ Bithumb, पनि अस्थायी रूपमा वास्तविक नाम संग खाता सिर्जना प्रक्रिया बाट विनिमय बहिष्कार गर्ने निर्णय. बैंक को प्रतिनिधि यस उपाय तथ्यलाई संग जडान लिइएका थियो बताए “विनिमय प्रहरी द्वारा जाँच गरिन्छ” गत वर्ष गरेको चोरी को मामला मा.
कर्पोरेट खाता प्रदान सानो र मध्यम आकारको आदानप्रदान, बरु भर्चुअल व्यक्तिहरूलाई भन्दा, अन्य आवश्यकताहरु विनियमित. को Yonhap प्रकाशन अनुसार, क्षणमा, कर्पोरेट खाता प्रयोग प्रदान आदानप्रदान पूर्णतया पैसा शोधन रोक्न आफ्नो दायित्व समर्थन गर्न सक्ने अनुमति छ, ग्राहकहरु को पहिचान पुष्टि गर्न साथै. साथै, तिनीहरूले subjected गरिनेछ “बैंकहरू र वित्तीय अधिकारीहरूले द्वारा राम्ररी चेक।” तथापि, धेरै आदानप्रदान नयाँ खाता पुष्टि प्राप्त गर्नुभयो र स्थिति परिवर्तन छैन भने तिनीहरूले लेनदेन निलम्बन भनेर Yonhap संवाददाता भन्नुभयो. कोरियाई Blockchain संघ अनुसार, बारेमा 787,600 ग्राहकहरु यस्तो आदानप्रदान को सेवाहरू प्रयोग, जसको सम्पत्ति limbo हाल छन्.
अघिल्लो पोस्ट:कोइनबेस Segwit को अन्तिम परीक्षण सुरु
अर्को पोस्ट:सबै Miners लागत कमी Bitcoin बच्नेछन्
सक्छ 11, 2018 मा 6:41 AM